MIUI 8.2 ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့ပြီး Xiaomi ကသတင်းအနည်းငယ်သာတင်ပြခဲ့သည် Androidsis
MIUI 8.2 ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ Xiaomi ကသတင်းအနည်းငယ်သာသိတယ်
Rafa Rodríguez Ballesteros | | reviews, ရွမ်, Xiaomi က
လွန်ခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကငါတို့ပြောနေတာ operating system ဗားရှင်း၏ Xiaomi ဆိပ်ကမ်းများစွာသို့ရောက်ရှိလာခြင်း. များစွာသောမျှော်လင့်ထားသည့်အရာများနှင့်မတူဘဲ MIUI9မရောက်ရှိခဲ့ပါ။ အဲဒီအစားရရှိခဲ့တာက version 8 ရှိ MIUI 8.2 ကိုနောက်ထပ် update တစ်ခုသာဖြစ်သည်။
အသုံးပြုမှုတစ်ပါတ်ပြီးနောက် ဒီဗားရှင်းအသစ်၏အသစ်အဆန်းများသည်သူတို့၏မရှိခြင်းကြောင့်ထင်ရှားသည်။ အမှန်အကန်ပြောရလျှင်နောက်ဆုံးအသုတ်သည် Xiaomi သည် MIUI 8 နှင့်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။ အနည်းငယ်သို့မဟုတ်လုံးဝမပြောင်းလဲခြင်းသည်ဤအလွန်နည်းပါးသောသက်တမ်းတိုးခြင်းကိုအနည်းငယ်စိတ်မ ၀ င်စားစေသည်။
1 MIUI 8.2 သည်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်
2 MIUI9သည်အရေးကြီးသောသတင်းများကိုယူဆောင်လာမည်လား။
MIUI 8.2 သည်ထပ်တူထပ်မျှဖြစ်သည်
MIUI သည်လက်ရှိတွင်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သည်ကို အခြေခံ၍ Xiaomi အသုံးပြုသူများသည်သတင်းအချို့ကိုလက်လွတ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ operating system တိုးတက်နေကြောင်းနှင့်၎င်းသည်လုပ်ဆောင်မှုအသစ်များကိုကမ်းလှမ်းကြောင်းဖော်ပြသည့်သတင်းဖြစ်သည်။ အမှားအသစ်တစ်ခုကိုလွှတ်လိုက်သောအခါယခင်ဗားရှင်းများ၏အမှားများကိုပြန်ပြင်သည်မှာမှန်ပါသည် ဒါပေမယ့်လုံလောက်လား။
ပြောင်းလဲမှုများအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အသစ်အဆန်းများဟုမခေါ်နိုင်ပါ၊ ၎င်းတို့သည်မည်သည့်ဆင့်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုမျှအထောက်အကူမပေးသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အချက်နှစ်ချက်ကိုထောက်ပြသည်။ ဥပမာ, ဒီဗားရှင်းအသစ်ကိုတပ်ဆင်ထားသည့် Xiaomi သည်လက်ဗွေကို အသုံးပြု၍ ကိရိယာကိုသော့ဖွင့်သောအခါတုန်ခါမှုမရှိပါ။ လက်ချောင်းဖတ်စက်ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လက်ချောင်းကိုမထည့်မီဖုန်းသည်သော့ဖွင့်ခြင်းမပြုမီတုန်ခါမှုသေးငယ်ခဲ့သည်။ စာဖတ်တာမှားနေရင်တုန်ခါနေတယ်.
လက်ဗွေဖတ်စက်နှင့်ပတ်သက်သည့်တိုင်ကြားမှုများကိုတင်ပြသူအချို့ရှိပါသည်။ ယခင်ပြoneနာကိုပယ်ဖျက်ပြီးလက်ဗွေရာကိုထပ်မံမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားဖြင့်ဖြေရှင်းထားသောနောက်ဆုံးအခြေအနေအရဖတ်ရှုခြင်းအမှားအချို့။ ကျွန်ုပ်တို့မီးမောင်းထိုးပြရန်ဘာမျှမမြင်ရသကဲ့သို့၎င်းသည်တုန်ခါမှုမဖြစ်မီယခု၎င်းသည်မပြသပါ။ အပြောင်းအလဲကိုသဘောကျပြီးတိုးတက်မှုကိုစဉ်းစားတဲ့သူတွေရှိပေမယ့်အဲဒီအဆင့်ကိုထိုက်သင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မထင်ပါဘူး။
Xiaomi မှာ MIUI 8.2 နဲ့ပြောင်းလဲသွားတဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဖုန်းကိုသော့ခတ်ထားတဲ့သတိပေးချက်တွေဖြစ်တယ်။ အကယ်၍ သင်သည် pop-up အကြောင်းကြားစာများကို activate လုပ်ထားလျှင်မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုကိုမျှသင်သတိမပြုမိပါ။ သင်အကြောင်းကြားစာရသည့် အချိန်မှစ၍ ဖုန်းသည်ဖွင့်ပြီးသက်ဆိုင်ရာစာကိုပြသည်။ သို့သော် အကယ်၍ သင့်တွင်ဤသတိပေးချက်များကိုပိတ်ထားပါကဖုန်းသည်သူ့ဟာသူဖွင့်နိုင်သည်၊ သို့သော်ဖန်သားပြင်ပေါ်တွင်ဘာမှမဖော်ပြဘဲ
အဓိကအချက်ကဒါပဲ အကယ်၍ ဖုန်းသည်အသိပေးချက်တစ်ခုဖြင့်တုန်ခါနေလျှင်၎င်းသည်သော့ခတ်မျက်နှာပြင်ကိုအလိုအလျောက်ဖွင့်သည်။ ယခင်ဗားရှင်းသည်အသိပေးချက် LEDs များကိုကြည့်သောအခါ၎င်းသည်မည်သည့်သတင်းအမျိုးအစားဖြစ်ကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။ ပြီးတော့ဒါကမက်ဆေ့ခ်ျတွေအများကြီးရရင်ဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုအပျက်သဘောသက်ရောက်စေနိုင်တယ်။
MIUI9သည်အရေးကြီးသောသတင်းများကိုယူဆောင်လာမည်လား။
တိုတိုပြောရရင်၊ ငါတို့မြင်တဲ့အတိုင်း ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ခေါ်ခံရဖို့ထိုက်ကြောင်းအလွန်ဆင်းရဲသောအသစ်အဆန်း။ MIUI 8.2 နှင့်တစ်ပါတ်အကြာအသုံးပြုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့များစွာမပြောနိုင်ပါ။ အမှန်တရားမှာထိုအရာဖြစ်သည် Xiaomi သည်ယခင်ကဲ့သို့ဆက်လက်အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အဓိကပြproblemနာဖြစ်နိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့အလုပ်လုပ်သည်နှင့်အမျှအရေးကြီးသောသတင်းများနှင့်အင်္ဂါရပ်များကိုကျွန်ုပ်တို့လိုချင်ကြသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောဖုန်းကိုစိတ်ကျေနပ်မှုမရှိတော့ပုံရသည်။ ကျနော်တို့ကပို။ ချင်တယ်။ ဖွဲ့စည်းမှုနှင့်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုအဆင့်များ ညှိနှိုင်းမှုပိုလုပ်ခြင်း၊ Xiaomi သုံးစွဲသူများသည်၎င်းတို့၏စက်ပစ္စည်းများကောင်းမွန်စွာလည်ပတ်နိုင်ခဲ့လျှင်ပိုလိုချင်သည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်အစကတည်းကကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့သူတိုင်းမှာတိုးတက်မှုအတွက်နေရာမရှိဘူး၊ ဒါကြောင့် Xiaomi မှာလွယ်လွယ်ကူကူတော့မရှိဘူး။
တိုးတက်သောဒီဇိုင်းများကဲ့သို့သောအင်္ဂါရပ်အသစ်များသည်အပိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများသုံးသောသုံးစွဲသူများအားဘာမှမလုပ်ပါ။ Notification Tones အသစ်ထပ်ထည့်ခြင်းသည်သတိပြုရမည့်အပြောင်းအလဲမဟုတ်ပါ။ လက်ဗွေဖတ်စနစ်ဖြင့်သော့ဖွင့်ခြင်း၏တုန်ခါမှုကိုဖယ်ရှားပြီးအသိပေးချက်များနှင့်အတူဖန်သားပြင်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဘာမှထူးခြားမှာမဟုတ်ပါဘူး။
သင် MIUI 8.2 ကို install မလုပ်ရသေးပါက ငါတို့သည်သင်တို့ကိုရန်မပြောလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါတို့ပြောရင် သငျသညျဖြစ်စေအခြားကမ္ဘာကနေဘာမှမပျောက်ပါဘူး။ လာကြ၊ ကွာခြားချက်ကိုသင်သတိမထားမိပါ ပိုမိုမြင့်မားသောဘက်ထရီသုံးစွဲမှုကိုဝေဖန်သူများလည်းရှိကြသည်။ ယခုအချိန်တွင် MIUI9မှမကြာခင်ထွက်ပေါ်လာတော့မည့်စောင့်မျှော်နေသည့်သတင်းကိုစောင့်ဆိုင်းရန်ကျွန်ုပ်တို့ရွေးချယ်စရာမရှိတော့ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ရွမ် » MIUI 8.2 ကိုကျွန်တော်တို့စမ်းသပ်ခဲ့တယ်၊ Xiaomi ကသတင်းအနည်းငယ်သာသိတယ်
Galaxy S8 + သည်ဘက်ထရီဒီဇိုင်းရှိပြီး Galaxy Note7နှင့်အတူတူဖြစ်သည်
Android အတွက် Instagram သည် offline mode ကိုစတင်ခဲ့သည်